ပီကေဝါးခြင်းကြောင့် သင်ရရှိနိုင်သော ကောင်းကျိုးများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ပီကေဝါးခြင်းကြောင့် သင်ရရှိနိုင်သော ကောင်းကျိုးများ
ပီကေဝါးခြင်းကြောင့် သင်ရရှိနိုင်သော ကောင်းကျိုးများ
Posted by မမလေး on Oct 27, 2012 in Creative Writing, Health & Fitness, Other - Non Channelized | 18 comments
Mail ထဲမှရတာပါ … တင်ထားတာမတွေ့သေးလို့ တင်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည် … သိပြီးသားဆိုလျှင် ခွင့်လွှတ်ပေးပါ …
ခုမှ ပြန်သုံးဖြစ်တာဆိုတော့ အကျုံးရော ၀င်သေးလားတောင် ပြောတတ်တော့ပါဘူး …
ပီကေဝါးတာကြောင့် တွေးခေါ် မြော်မြင်နိုင်တဲ့ အစွမ်းကို တိုးစေကြောင်း သိပ္ပံနည်းကျ ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ ပီကေဝါးတာက ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ဂလူးကို့စ် အဆင့်ကို တိုးစေပြီး စိတ်နဲ့ ခန္ဓာ နှစ်မျိုးစလုံး အတွက် လောင်စာအနေနဲ့ အာနိသင် ရရှိစေပါတယ်။ ပီကေဝါးတာကြောင့် ဦးနှောက်ဆီကို သွေးစီးဆင်းမှု တိုးစေပြီး နှလုံးရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာကို ကောင်းမွန်စေကာ သွေးနဲ့ အောက်ဆီဂျင် စီးဆင်းမှုကို အဆက်မပြတ် တိုးစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် စာမေးပွဲ ဖြေဆိုချိန်အတွင်း ပီကေဝါးပေးရင် အမှတ်ကောင်းကောင်း ရရှိစေပါတယ်။
သကြားမပါတဲ့ ပီကေကို ဝါးပေးရင် သင့်ခါးအတိုင်းအတာကို ထိန်းပေးပါလိမ့်မယ်။ ပီကေဝါးတာ တစ်နာရီကြာတိုင်း ၁၁ ကယ်လိုရီ လောင်ကျွမ်းစေလို့ပါ။ ပီကေဝါးတာက သင်ရဲ့ အစာ စားချင်စိတ်ကို လျော့ကျစေပြီး ကယ်လိုရီ များများ ရယူမှု မဖြစ်အောင် တားဆီးပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် မကြာခဏ ဗိုက်ဆာနေတယ်ဆိုရင် ပီကေ ဝါးပေးသင့်ပါတယ်။
စာမေးပွဲမဖြေခင် စိတ်ပူပန်နေတဲ့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေက ပီကေဝါးနေကြတာ မြင်ဖူးမှာပါ။ လက်သည်း ကိုက်နေတဲ့ သူတွေလည်း ရှိကောင်း ရှိမှာပါ။ ဒါက စိတ်ဖိစီးမှုကို ဖြေဖျောက်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပီကေဝါးတာက စွမ်းအင်ကို ထွက်ရှိစေပြီး သင့်ကို စိတ်အပန်းပြေစေပါတယ်။ ပီကေကို ဝါးလေလေ၊ စိတ်ဖိစီးမှု လျော့ကျလေလေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပီကေဝါးတာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ဂလူးကို့စ် အဆင့်တိုးစေတဲ့ အတွက် အပန်းပြေစေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပီကေဝါးတာက တံတွေး အထွက်နှုန်းကို တိုးစေတာကြောင့် ခံတွင်းကျန်းမာရေးကိုလည်း ကောင်းမွန်စေတယ်လို့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ယုံကြည်ကြပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ပီကေဝါးတာကြောင့် သွားတွေမှာ ကပ်ညိနေတဲ့ သကြား၊ စားကြွင်းစားကျန်တွေနဲ့ ပိုးတွေကို ကင်းစင်သွားစေလို့ပါ။ သကြားမပါတဲ့ ပီကေဝါးတာကြောင့် သွားပိုးစားတာကို ကင်းစေပြီး ခံတွင်းထဲက ပိုးသတ် အာနိသင်ကို တိုးစေပါတယ်။ ခံတွင်းအနံ့ဆိုးကို ကင်းစေပြီး သွားတွေကို ဖြူစင်စေကာ စိတ်ခံစားမှုကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။
ပီကေဝါးတာကြောင့် တံတွေးထွက်နှုန်း တိုးသလို အူလှုပ်ရှားမှု ကောင်းစေတာကြောင့် အစာကြေညက်စေပါတယ်။
ပီကေဝါးတာဟာ အာရုံစူးစိုက်မှု ကောင်းစေသလို ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု မဖြစ်အောင်လည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ဖာဂူဆန် လား ? သူတော့ အမြဲဝါး နေတာ မန်ယူပွဲတွေ တိုင်း တွေနေရတာပဲ !
ဟုတ်တယ်ရှင့်…ဖတ်ရင်း အဲ့လိုပဲ တွေးမိလိုက်တယ်..ပီကေ နဲ့ ဖာဂူဆန်နဲ့ ခွဲမရဘူး..
Wimbledon မှာ tennis ကစားတာ လာကြည့်တုန်းကတောင် အရှိန်မသေသေးဘူး..
၀ါးတုန်းပဲ…Fergusonကြီး ဘောပွဲကနေများ ဆက်လာသလားမသိဘူးလို့ ပြောမိသေး
တယ်… :D :D
မေးရိုးကား တယ်ဆိုတာ မေးရိုးကျယ်လာတာနဲ့ အတူတူပဲလား
မေးရိုးကျယ်လာတယ်ဆိုရင်တော့ ၊ ပီကေ ကို ငယ်ကတဲက ဝါးသင့်ပါတယ်
ကမ္ဘာပေါ်မှာ မေးရိုးကျဉ်းတဲ့လူဆိုလို့အရှေ့ တောင်အာရှက လူတွေပဲ ရှိတယ်တဲ့
မေးရိုးကျဉ်းတော့ အံဆုံးသွားဟာ ထွက်ရခက် ပေါက်ရခက် ၊ နောက်ပြီး အံဆုံး ကန့် လန့် ပေါက်လို့ဒုက္ခများရပါတယ်
နောက်ပြီး စင်ကာပူ မှာ ပီကေဝါးခြင်းကို ဥပဒေနဲ့ တားမြစ်ထားတယ်ဆိုတာ ဟုတ်လားဗျို့ 
ကိုပေရေ.. စကာင်္ပူမှာ ပီကေ၀ါးတာတွေ တားမြစ်တာ တစ်ချိန်တစ်ခါကတော့ ဟုတ်တယ် ။ သူတို့ဆီမှာ မြေအောက်ရထားတွေ စပြေးကာစ ၁၉၉၂ ၀န်းကျင်လို့ထင်ပါတယ် ။ အဲ့ဒီတုန်းက ထိုင်ခုံတွေ အောက် ကပ်သွား တာက နေ စပြီး ပိတ်ပင်တာပါ ။
အခုတော့ သိဝူး .. ပြန်ဖွင့်ပေးတယ် ဆိုလား .. မသေချာ..
နောက်ကြားဖူးတာကတော့ အစာအိမ် ဒုက္ခပေးတယ် ဆိုလားလို့ .. ဗိုက်ထဲ အစာမရှိဘဲ ၀ါးလို့ အစာအိမ်က အစာခြေဖျက်ဖို့ အရည်ထုတ်ပေးပေမဲ့ အစာအိမ်ထဲ အစာ မရှိရင် အစာအိမ်ဒုက္ခပေးတယ် မှတ်ဖူးပါသည် ။
တစ်ခါတစ်လေကြတော့ ပီကေဝါးလိုက်တော့ အာပုတ်ဒေဘာဒေ သိပ်မနံဒေါ့ဘူးပေါ့
အချို့များ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တွေ့ဒေါ့မယ်ဆိုရင် ပီကေဝါးဂျသပေါ့
ပီကေထဲမှာ ရောဘာပါလားမသိ ( ရမ်းပြောဒါ )
တစ်ခုရှိတာက လူကြီးသူမတွေနဲ့ ဇဂါးပြောဒဲ့အခါ ပီကေတစ်ဝါးဝါးနဲ့ကျတော့
နည်းနည်း တစ်မျိုးဂျီးဖြစ်နေမလားမသိပါဘူး မယ်သီလလူထွက်ခင်ဗျား
မေးရိုးကျဉ်းတော့ အံဆုံးသွားဟာ ထွက်ရခက် ပေါက်ရခက် ၊ နောက်ပြီး အံဆုံး ကန့် လန့် ပေါက်လို့ဒုက္ခများရပါတယ် … ဆိုတာတော့ ခုမှသိတယ် …
ဒီမှာနောင်တရနေတာ ငယ်ငယ်တုန်းက မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းနဲ့ ပီကေ၀ါးတာများလာလို့လားမသိဘူး တဖြည်းဖြည်း မေးရိုးကားလို့ စိတ်ညစ်နေတာ … … ခုတော့ ကောင်းကျိုးတွေများလို့ အားတတ်သွားပြီ
သမိန်ပေါသွပ် ကာတွန်းထဲက အာတာလွတ်မြို့စားကြီးနဲ့တူတဲ့ ဂေါင်ဇူးလေးကို ဦးကြောင် ခြစ်တယ်…. :barr:
အာတာလွတ်မြို့စားကြီး ကိုမသိဘူး …. ကောင်းတဲ့လူလား … မကောင်းတဲ့လူလား … သမီးကလည်း ပြန်ကုတ်တတ်တယ်နော် … ဟွန်း …
ကုတ်တယ်မခေါ်ဘူး ခြစ်တယ်ခေါ်တယ်၊ ဦးကြောင်မှာ ဂေါင်ဇူးလေး ခြစ်ရာတွေ အပြည့်ပါပဲကွယ်။ ဂေါင်ဇူးလေးကို နှစ်ဆပြန်ခြစ်မည့် ဦးကြောင်ကြီး :harr:
ဟေး ဟေး ဒီမှာဗျိူ့ ….. ဦးကြောင်ကြီးက ခြစ်ရာတွေ အများကြီးလို့ ပြောနေတယ် … မတွေ့တာတောင် ကြာပြီဟာကိုး … ညာပြောတယ် … ဦးကြောင်ကြီးစကား ၂ နဲ့စားအကြွင်း သုည မယုံရ … သတိထားကြနော် … ခုတော့ အိပ်ပြီ … တတ်တာ … အိပ်မက်လှလှမက်ကြပါစေ … <3
ကျော်ပြီးမချစ်ပါနဲ့ … ငရဲကြီးကုန်ဦးမယ် … ဘေးကနေရှောင်လာခဲ့လေ
ပီကေရယ် ပြောင်းဖူးမီးဖုတ်ရယ် စားချင်ဘူး
ပီကေ၀ါးရင်ကောင်းတဲ့အချက်က သချောင်ပြီးတော့ အနံ့ဆိုးထွက်တာသက်သာတယ်လေ
ပြောင်းဖူးနုရင် စားလို့ကောင်းမှကောင်း … ကိုပေါက်က ရင့်တာသွားစားတာကို … နောက်နုတာလေး ၀ယ်စားကြည့် … နောက်ဆို ပြောင်းဖူးမီးဖုတ်မှ ပြောင်းဖူးမီးဖုတ်ဖြစ်လို့ ပြောင်းဖူးသည်တောင် အိမ်ခေါ်ထားရမယ်မှတ် …
ပီကေ ကြိုက်တာနဲ့တော့ အန်ကိုက်ပဲ လာထားဝါးအုန်းမယ် ပီကေ
အင်းအဲဒီ သတင်းလေးကို အမ်မာ တီဗွီ ဖိုး (MRTV 4) ခေတ်သစ်ပျိုမေ ကဏ္ဍ မှာ တစ်ခါထုတ်လွင့်ဖူးတာဖတ်လို့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရုပ်သံဆိုတော့ တစ်ခါတည်း မှတ်ရတာလေ အခုကျတော့ ဘယ်တော့ ပြန်ကြည့်ကြည့်ရတယ်ဆို တော့ ကောင်းတာပေါ့။